Yoomii as OPDO’n murtii laachuu jalqabde? – Welcome to bilisummaa
Yoomii as OPDO’n murtii laachuu jalqabde?
(Obsaan dubbisii xumuri, ‘share’ godhii dabarsi)
(By: Saphaloo Kadiir)
1. Master plaaniin Finfinnee fi godina addaa Oromiyaa nananoo Finfinnee guutummaatti akka haqamu;
2. Oromiyaan faayidaa addaa Finfinnee irraa argattu, kan heera wayyaanee keessa ture ja’an san OPDO’n hojiirra oolchuuf hojjechaa jiraachuu;
3. Labsii bulchiinsa magaalota Oromiyaa haareya bahe keessaa keeyyata uummatni hin barbaanne irra deebi’amee akka fooyya’u;
4. Rakkoo bulchiinsa gaarii jiru uummata wajjin dhawaataan hiikuu;
5. Uummatni humnoota badii balaaleffatanii seeratti dhiheessuuf opdo wajjiin akka dhaabbatu;
6. Sabaa fi sablammoonti Oormiyaa keessa OPDO wajjin akka tumsu;
7. Miseensotni OPDO kaayyoo fi galii dhaabichaa cichoominaan galmaan gahuuf akka itti fufan;
8. Miseensotnii ADWUI fi deeggartootni isaa kaayyoo waloo qaban akka cimanii itti fufan… kan jedhu labsii moo dabsii kan dhimmi isaa hin beekkamne tokko hatattamaa baafte halaakte. OPDO aangoo akkanaa eessaa argatte?
▪ Tuffiifi balfa qabaniif irraa ka’uun ummata oromoo mirga isaa gaafate milliyoona 50 “አሸባሪ; ጋኔል; ጋንግስተር; ጠንቋይ” jechuun arrabsan,
▪ Gaafa lubbuun ilmaan oromoo 150 du’aan dabarte, namni 3,000 ol rasaasa wayyaaneetiin madaawanii hospitaalli hundi madoo rasasa wayyanen gutame, irra caalaan ammoo shaffeellee dhabanii du’aa jiruu jiddutti sakaraataa jiran, yeroo ilmaan oromoo 10,000 ol badii takka malee mana hidhaatti adabsaman,
▪ Barattoonni Oromoo lakkoofsi hin beekkamne barumsa dhaban, kaaniis guutumatti gabatee barnootaa irraa arihaman, akkasumaas wayta shamaran oromoo humna waraanaatiin universitii keessati dirqisiifamanii gudeedaman,
▪ Yeroo dubartiin ulfa ji’a 7 ajjeefamtee gatamtu, Mucaan umri waggaa 7 mana barumsaa keessatti boombiin wayyaane itti darbatamee qaxara qooru, dargaggeessi arra fuudhaa deemu yeyyiin rasaasan cidha isaa gadda (taaziyaa) ti jijjiirtu, barattoota Oromoo fi hawaasa keessaa nama ajjeesanii qilee, bishanii fi bosonatti yeroo gatan,
▪ Yeroo waraanni wayyaanee qabeenya namaa saamuu, qe’ee qonnaan bulaa ibiddaan gubu, nama ajjeessee maallaqa hangana fiddan malee reeffa hin fudhattan jechuun gadda dhangaggaawaa irratti gadda hadhaawaa dabalan,
▪ Heeraa fi Seera ifumaaf baafatan cabsuun Oromiyaan guututti humna waraanaa jalatti darbsn, Oromiyan mirga isiitii fi caasaa ittiin federaalaan wal qunnamtu qabduu akka maasaa abbaa hin qabneetti jallaaf ballaan marti oliif gad akka barbaadeetti keessa shalfu…. shira meequmaaf meeqa himee kam dhiisare?
⏩ Gaaffiin master pilaanii ummanni kaase sirrii tahuu erga amantan, namoota gaafficha kaasanii hidhaman mara hatattamaan bilisa gad lakkisaa. Lubbuu fi qabeenya badeefiis itti gaafatamummaa fudhadhaa.
⏩ Aangawoota wayyaanee kan ummata oromoo gaaffii mirgaa kaasan rasaasaan laboobuun aara isaan baasuu dhabnaan, ummata kabajamaa arrabaan xiqqeessaa, saba qulqulluu abaarsaan xureessaa turan, Keessattuu, aangawoonni akka Abbaay Xahayyee, Geetachuu Raddaafi Haylamaariyam Dassaaleny’faan hatattamaan akka ilmaan oromoo dhiifama gaafatan taasisaa.
⏩ Ilmaan oromoo master pilaanii dura maqaa investimentiin lafa isaarraa buqqaaftan hatattamaan lafa isaanii irratti akka deebi’an taasisaa.
⏩ Magaalaalee oromiyaa kan wayyaaneen faaydaa isii guuttachuuf, oromiyaarraa mogoltee tan oromoo tahuu hanqifte Finfinnee irraa jalqabii tan akka Dirree Dawaa, Harar, Walloo fi kkf hatattamaan akka harka oromootti deebi’an taasisaa.
⏩ Humnoota farra nageenyaa fi farra misoomaa, humnoota badiitu fincila kana duuba jira jechaa turuun keessan ni yaadatama. Amma immoo gaafiin ummataa sirriidha, wanti ummanni hin barbaanne hafuu qaba jechaa jirtan. Eega humnoonni badii ummata waan sirrii irratti kakaase, isin opdo irra humnoota badii isin jettan saniitu sirriidha jechu. Yaadni isaanii uummata bal’aa guutuu Oromiyaa biratti fudhatama qabate jechuudha. Kana kan mirkaneessu bahaa dhiha, kaabaa kibbatti ummanni ka’uu isaati. Kanaaf, alagaaf humna badiiti malee isiniifi ummata oromootiif jarri muka dawaati waan tahaniif, hatattamaan humna badii sanitti makamaa. Yoo qaanfattaniifi sodaattan ammoo ummatuma bal’aa ni yaannaaf jettanii itti kijibdan kanatti makamaa.
⏩ Warroota badii takka malee ilmaan oromoo gaaffii mirgaa gaafatan rasasaan labooban seeraaf dhihaatanii akka gaafataman, gaafatamuu qofaa miti adabbii gahaa akka argitan taasisaa. Gama biraatiin humna waraanaa oromiyaa keessa akkuma baroota jalqaba 90’mootaa sanitti meeshaa waraanaa gurguddoo hawaasa keessatti ramadatan osoo ollee hin bulle dafaa akka oromiyaa guututti gad lakkisanii bahan taasisaa.
Previous Labsi OPDO ‘karoorri Master Plaaniin guutummaa guutuutti haqameera’ jedhu seenaa Wayyaanee waggaa 24 keessatti injifannoo ummata Oromoo isa duraa ti!
Next Decades Worth Of Fear Has Turned Into Anger In Ethiopia